Taliye ciidan oo laga soo celiyey Kismaayo & Maamulka Jubbaland oo war ka soo saaray – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Taliye ciidan oo laga soo celiyey Kismaayo & Maamulka Jubbaland oo war ka soo saaray
Maamulka Jubbaland ayaa saaka garoonka dayuuradaha magaaladaas ka soo celiyey taliye loo Magacaabay guutada 43-aad ee ka howlgasha degaanada Jubbaland.
Taliyaha oo lagu magacaabo Cali Bogmadow ayaa dhawaan dowladda Soomaaliya u magacowday Guutada 43-aad, isagoo beddeli lahaa taliyihii xilkaasi laga qaaday Jen. Ismaaciil Saxardiid, waxaana taliyeha loo diiday Kismaayo uu dib ugu soo laabtay Muqdisho oo markii hore laga diray.
Haddaba maamulka Jubbaland ayaa soo saaray war qoraal ah oo ku saabsanaa sababaha ay u soo celiyeen taliyaha cusub kaasoo u qornaa sidatan:-
Three dead as Al Shabaab raids Kenyan police station